July 2009 – Everybody Read TChen
ရာသီပျက်အလွမ်း (ဆောင်း dual version)
စောင်လိုခြုံပြီး . . .
နင့်ပခုံးကိုမှီရင်း . . .
နင့်လက်ကိုကိုင်ဆုတ်ရင်း . . .
နင့်ဘေးမှာတိတ်တိတ်ထိုင်ရင်း . . .
A Chen and BS
Bkk and Ygn
Posted on July 31, 2009 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, အတွဲ ကဗျာများ1 Comment on ရာသီပျက်အလွမ်း (ဆောင်း dual version)
ရာသီပျက်အလွမ်း (နွေ BS’s solo version)
ချာချာလည်ရူးသွပ်လို့ . . .
အသစ်ဝေနိုင်ခဲ့ရင်ကောင်းမှာ . . .
ကိုယ့်ဘ၀က ကဗျာတစ်ပုဒ်ထဲ . . .
ပူလောင်ဖို့လိုသေးလို့လား . . .
လွင့်လို့ . . .
Posted on July 30, 2009 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, အတွဲ ကဗျာများ2 Comments on ရာသီပျက်အလွမ်း (နွေ BS’s solo version)
ရာသီပျက်အလွမ်း (နွေ Addy’s solo version)
ရာသီပျက်အလွမ်း (နွေ solo version)
ငါ့ဘဝရဲ့ avian လေးရေ
Posted on July 30, 2009 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, အတွဲ ကဗျာများ1 Comment on ရာသီပျက်အလွမ်း (နွေ Addy’s solo version)
ရာသီပျက်အလွမ်း (နွေ dual version)
လိုသေးလို့လား . . .
Posted on July 29, 2009 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, အတွဲ ကဗျာများ2 Comments on ရာသီပျက်အလွမ်း (နွေ dual version)
ရာသီပျက်အလွမ်း (မိုး Min Min’s Solo Version)
Posted on July 28, 2009 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, အတွဲ ကဗျာများ1 Comment on ရာသီပျက်အလွမ်း (မိုး Min Min’s Solo Version)
ရာသီပျက်အလွမ်း (မိုး BS’s Solo Version)
ဗရုတ်သုတ်ခ လွင့်ကျလို့ . . .
စကားတွေ ဖောင်ဖွဲ့နေခဲ့ပေါ့ . . .
မိုးစက်တွေ လွင့်နေပါစေ . . .
အနာဂတ်တွေ ပဲ့ကျနေပစေ . . .
ထိန်ထိန်ညီးလောင်ကျွမ်းလို့ငါ . . .
Posted on July 28, 2009 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, အတွဲ ကဗျာများLeaveacomment on ရာသီပျက်အလွမ်း (မိုး BS’s Solo Version)
ရာသီပျက်အလွမ်း (မိုး Addy’s Solo Version)
၃၆၀ ဒီဂရီကတော့ ရှိမယ်
Posted on July 28, 2009 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, အတွဲ ကဗျာများLeaveacomment on ရာသီပျက်အလွမ်း (မိုး Addy’s Solo Version)
ရာသီပျက်အလွမ်း (မိုး Trio Version)
ထုံးစံအတိုင်းပါပဲ မရေးတာကြာလို့ မိဘုတ်နဲ့ ကဗျာတပုဒ်ရေးပါတယ်
တီက စရေးတာပါ ပြီးတော့ မိဘုတ်က ရေးပါတယ်
ပြီးတော့ တီ နဲ့တူတူနေနေတဲ့ တီ့မောင် က လာကြည့်ပြီး သူလဲတပိုဒ်ရေးမယ်ဆိုပါတယ် အဲ့တာနဲ့တီကလဲရေးပေါ့နော်
အဲ့မှာ ဒင်းကရေးပါတယ် တွေ့တဲ့အတိုင်းပါပဲ တီ့ကိုစောင်းရေးပါတယ်
ဖတ်ကြည့်ကြပါ တီကလဲသူရေးရင်ရေးစရာပါပဲ တီက သူ့ကိုဘေးမှာထားပြီး
တခြားကောင်လေးတွေ ကိုကြည့်ပါတယ် ကြည်ရုံတင်လား ဆိုတော့ မကပါဘူး
သိတော်မူကြတဲ့အတိုင်းပါပဲ တီတလောက တင်ထားတဲ့ပုံတွေ က သူ့ရှေ့မှာဖြစ်တာပါ သူက ပြောပါတယ် သူခံစားရတယ်တဲ့ ဟုတ်မှာပါ တီကတော့ မသိဘူး တီက ချစ်မှမချစ်တတ်တာလေနော် ………….ကဲခင်ဗျားတို့ပဲပြောကြပါအုံး ပရိတ်သတ်တို့ရေ……….
ငါ . . . နေပျော်နေပါတယ်။
BS, A Chen Vs Min Min
Wrote online via gtalk
Posted on July 26, 2009 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, အတွဲ ကဗျာများ5 Comments on ရာသီပျက်အလွမ်း (မိုး Trio Version)
မျက်လုံးပေါ်က ကြယ်နဲ့လ (စ ဆုံး)
တနေ့ က ခေါင်းအုံးလေးတလုံးဝယ်လိုက်တယ်။ ခေါင်းအုံးလေးက သေးသေးလေး ကိုယ့်လက်ဖဝါးထက်နည်းနည်းလေးပဲ ပိုရှည်တယ်။ ပြီးတော့ မျက်လုံးကိုအုံးရတဲ့ခေါင်းအုံးလေး။ မျက်အုံးလို့ခေါ်လို့ရမယ်ထင်တယ်။
မျက်လုံးမှာလဲ သူ့အတွက်သီးသန့်လုပ်ထားတဲ့ ခေါင်းအုံးရှိလိမ့်မယ်လုိ့မထင်ဘူးမှလား?
မျက်အုံးလေးက ပိုးချည်ထည်လေးနဲ့ချုပ်ထားတာ။ အထဲမှာတော့ ရေမွှေးပန်းခြောက်လေး (Lavenders) တွေထည့်ထားတယ်။ အိပ်ခါနီးဒါမှမဟုတ် မျက်လုံးတွေ ညောင်းနေပြီလို့ခံစားရရင် မျက်အုံးလေး ကိုမျက်လုံးပေါ်မှာ တင်ထားလိုက်ရုံပဲလေ။ ပြီးတော့ မျက်အုံးကို ပိုးထည်လေးနဲ့ချုပ်ထားတဲ့အတွက် မျက်လုံးထောင့်စွန်းနားမှာ ကျီးခြေထောက်လိုမျိုး အရေးအကြောင်းတွေပေါ်လာမှာမျိုးမပူရတော့ဘူးလေ။ ပြီးတော့ အထဲမှာ ထည့်ထားတာက လဲပန်းခြောက်လေးတွေပဲဆိုတော့ မျက်လုံးကိုဝန်ပိစေလောက်တဲ့အလေးချိန်မရှိတော့ဘူးပေါ့။ မျက်အုံးလေးကိုလဲ ပေါ့ပေါ့လေးနဲ့ မျက်လုံးပေါ်တင်ထားရင် ဇိမ်တမျိုးရှိစေတယ်လေနော်။ ပြီးတော့ မျက်အုံးလေးက အပူအအေး နှစ်မျိုးလဲသုံးနိုင်သေးတယ်လေ။ အအေးလေး သုံးချင်ရင် မသုံးခင် ရေခဲသေတ္တာထဲခဏ ထည့်ထားပြီး သုံးရင် မျက်လုံးရောင်တာ ဘာညာ သက်သာစေနိုင်တယ်လေ။ အပူပေးပြီးသုံးရင်တော့ အကြောအချင်တွေပြေစေတာပေါ့။
တရက်တုံးက ညီမလေးတယောက်က ကိုယ်စာတွေရေးလိုက်၊ အလုပ်တွေများ၊ အိပ်ရေးတွေပျက်နေတာ မြင်လို့ ဒီမျက်အုံးလေး ကို မိတ်ဆက်ပေးတာ။ အစကတော့ ကိုယ်လဲ ယုံတဝက် မယုံတဝက်ပါပဲ။ တနေ့ကတော့ စိတ်ပါတာနဲ့ သွားဝယ်ပြီးအိမ်မှာ အစမ်းသုံးကြည့်တာ တကယ်ကိုဇိမ်ရှိတာပဲ။ မျက်လုံးက မျက်အုံးရှိပြီးကတည်းက ပိုပြီးကြည်လင်လာသလိုပဲ။ အညောင်းအကိုက်လဲ တော်တော်သက်သာသွားတယ်။
ကိုယ်ဝယ်ခဲ့တဲ့ မျက်အုံးလေးက မစ်ကီမောက်စ်ပုံလေးနဲ့ တခြားရွေးစရာလဲမရှိဘူးလေ။ ဘူးလေးထဲမှာ လာဗင်ဒါး ပန်းရဲ့ ရေမွှေးဆီပုလင်းလေးလဲပါတယ်လေ။ လိုအပ်တဲ့အချိန်ကျရင် မျက်အုံးလေးထဲ နည်းနည်းထည့်လို့ရတာပေါ့။
တကယ်လို့သာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိမယ် ဆိုရင် မျက်အုံးကို အရောင်အမျိုးမျိုး အနံ့အမျိုးမျိုးနဲ့ ပုံအမျိုးမျိုး ရှိစေချင်သေးတယ်။ အဲ့တာမှ မျက်လုံးပေါ်တင်ထားတဲ့အချိန်ကျရင် မမြင်ရပေ မယ့် မျက်အုံးပေါ်က ပုံတွေက တကယ်လို့များ လ နဲ့ ကြယ်တွေ ဖြစ်မယ်ဆိုရင် ကိုယ်ထင် တယ်လေ အဲ့ဒီ အိပ်စက်ခြင်းကလေးတခုက ပိုပြီးပြည့်စုံသွားမှာလို့။
အရင်တုံးက လူ့ဘဝ မှာ ကိုယ့်ဆီက သူများတွေ ဘယ်လိုမှ လုမယူသွားနိုင်တဲ့အရာ (၃) ခုရှိတယ်လို့ ထင်ခဲ့တယ်။ အမှတ်တရတွေနဲ့အတိတ်ရယ်၊ အသိပညာရယ် နောက် ဗိုက်ထဲ ကိုရောက်သွားတဲ့ ကိုယ်စားလိုက်သမျှစားကောင်းသောက်ဖွယ်တွေရယ်ပေါ့။ ခုတလောမှစဉ်းစားမိတာ စတုတ္ထအရာ တခုရှိသေးတယ်… အဲ့တာက ဘာလဲ ဆိုတော့ ကိုယ့်ရဲ့ အိပ်မက်တွေပေါ့။
မင်း ကိုယ့်ဆီက အရာတော်တော်များများ ယူသွားလို့ရတယ်၊ ယူသွားနိုင်တယ် ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့ အိပ်မက်တွေ ကိုတော့ ယူမသွားနိုင်ဘူးလေ။
အိပ်မက်လှလှလေးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ခြောက်ခြားစရာ အိပ်မက် ပဲဖြစ်ဖြစ် ပေါ့။ ကိုယ့်ရဲ့ အချစ်ဆုံးသူ ဖြစ် နေရင်တောင် ဘယ်လိုမှ ကိုယ်နဲ့ အတူတူ အိပ်မက်တခုထဲ ကိုဝင်မမက်နိုင်ဘူးလေ။ ဘယ်လောက်ပဲ အရမ်းချစ်ပါတယ် ပြောပြောလေနော်။ တကုတင်တည်း အိပ် ပြီး တအိပ်မက်ထဲမက်တယ် ဆိုတာ စာအုပ်ထဲမှာပဲရှိတာ ကိုးနော်။
မင်းကိုဘယ်လောက်ပဲချစ်ချစ် အလွန်ဆုံး ကိုယ်ပေးနိုင်တာက မျက်အုံးလှလှလေး ဝယ်ပေးရုံပါပဲလေနော်။ ကိုယ့်မျက်လုံးပေါ်က လနဲ့ ကြယ်တွေ ကို မပေးနိုင်ဘူးလေနော်။
ဒါပေမယ့် ကိုယ်မင်းကိုချစ်ပါတယ်လေ။ ဒါမှမဟုတ် အနည်းဆုံးချစ်ခဲ့ပါတယ်ပေါ့…
၈နာရီ ၀၉ မိနစ်
၂၂ရက် ဂျူလိုင်လ ၂၀၀၉ ခုနှစ်
Posted on July 26, 2009 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ဆောင်းပါ6း Comments on မျက်လုံးပေါ်က ကြယ်နဲ့လ (စ ဆုံး)
တခါတင်ဖူးတဲ့ သူငယ်ချင်းရဲ့ ကော်ဖီစားပွဲစာအုပ် အတွက်ပါပဲ
သူက တီအရင်တခါက ရေးပေးတဲ့ ဧရာဝတီ အပြင် ကို ထပ်ရေးစေချင်တယ်ဆိုတာနဲ့ ဒီပုံလေးတွေ ထပ်ပေးလာတယ် အဲ့တော့ တီလဲကြံရာမရ ရရာကြံပြီးရေးပေးထားတယ် ဝေဖန်ကြပါအုံး ထုံးစံအတိုင်း အီးလိုပဲပေါ့
Come once for…
More than 40,000 Pagodas and Stupas
You close your eyes in the land of Bagan
Point wherever and walk straight in your
Then you will end up at Pagodas
Thynngyan (water festival)
Soaked and drenched
Washing away all my worries,
Stress, bad luck, from last year
With the friendly water and
To start as “new”
“Don’t you think I am beautiful?”
Watergate Mirriot Hotel
Posted on July 24, 2009 February 7, 2018 Categories coffee table booklet, Scattering thoughts, Uncategorized, Uncategorized4 Comments on coffee table booklet